Ny fifindran'ny hafanana famindrana hafanana
Ny fizotran-javatra araka ny fomba stamping mafana dia azo zaraina amin'ny ranomaso voalohany, ny hatsiaka ary ny ranomaso mafana. Ny karazan-tsarin'ny Glass Bead Hot dia ao anatin'ny fizotran'ny ranomaso voalohany, ao anaty hafana mafana, no ho modely amin'ny horonantsary PET eo ambony rovitra, mijanona eo amin'ny lamba. Ny dingana mangatsiaka Cold Tear ...
Fampidirana famindrana hafanana
Ny hosodoko mafana, arakaraka ny fahatsapana sy ny fijery hita maso dia mizara ho: Flat Hot Painting sy ny sary hosodoko telo sosona. Ny hosodoko mafana amin'ny Flat ihany koa dia misy: manonta ny hosodoko mafana, ny loko mafana amin'ny swimsuit, hosodoko mafana Voahangy, endrika Koreana marevaka ny sary hosodoko, ny vava mangatsiaka Koreana endrika hosodoko mafana, volamena / S ...
Ahoana no hizaha toetra ny famoahana ny sarimihetsika biby mandritra ny fitetezana?
Namboarin'ny DuPont tamin'ny fiandohan'ny taona 1970, ny fitaovam-piadiana am-paosy dia nampiasaina tamin'ny indostria. Ohatra, ny tavoahangy plastika Coca Cola izay hitantsika ankehitriny dia vita amin'ny alikaola. Ampiasaintsika eto ambany ity tester hery Peel ity: Fampiharana: fiarovana ny tany, mekanika ary famindrana ny fanontana sy ny sisa. Mpiady horonantsary PET ...
Ahoana no fiantsoantsika ny sarimihetsika Pet?
Pet: ny anarana sinoa dia 聚 对 苯二甲酸 乙二醇 酯, Anarana anglisy: polyethylene terephthalate, antsoinay hoe fohifohy, ary antsoina koa hoe sarimihetsika PET. Motsifotsy fotsy na mavo mavo, mavom-bolo vita amin'ny kristaly misy volo malefaka sy mamirapiratra. Nanana fananana ara-batana sy mekanika tena tsara izy ...
Fomba fanontana famindrana hafanana amin'ny sarimihetsika biby
Dongguan Jinlong Heat Transfer Material Co. Ltd. ADD: Faritra Industrial Macheng, Distrikan'ny Chigang Management, Humen Town, City Dongguan, Faritanin'i Guangdong, Sina. Tel: + 86-769-85550877 Fax: + 86-769-85700733 Isika rehetra ao anatin'ity ady miady amin'ny corona-virus ity miaraka, mandehana amin'ny terri ...
Ny fampidirana ny famindrana hafanana dia mitohy ny fametahana mony - --Jinlong famindrana hafanana co., Ltd
1 、 Korea kalitaon'ny famindrana hafanana famindrana hafanana: （1） 100 fotoana fanasana （2） elastika mahery vaika （3 （Didy kely delivery 4 delivery Fanaterana haingana ho toy ny orinasa famindra hafanana matihanina momba ny orinasa mpamokatra horonantsary, manome soso-kevitra izahay ny temotra famindrana hafanana: 135 ℃, 5S , fanerena mahazatra. Temotra famindrana hafanana. Fomba Peel Pejy 130-135 ℃ ...
JL fitaovana famindrana hafanana co. Manolotra ny OEM ny vokatra rehetra misy vidiny mifaninana sy kalitao maharitra ho an'ny mpanjifantsika. Mandaitra sy tsara kalitao: Fampanantenain'ireo vokatra ataonay avy amin'ny tranombarotra mpivarotra mpisava lalana fotsiny izay manome fitaovana avo lenta amin'ny fanombantombana maro ...
Jinlong Heat Transfer Material Co. Ltd. (JLheattransfer) dia naorina tamin'ny 2012, niasa ho mpanamboatra matihanina sy mpanondrana
Tamin'ny voalohany JLheattransfer dia tsy nahavita laka mafana mitete hafanana fotsiny ho an'ny indostrian'ny fanodinana hafanana. Saingy tsy ela taorian'izay ny ezaka ataonay Andriamatoa Zhang, JLheattransfer dia miakatra ny tohatra hafa amin'ny indostrian'ny famindrana hafanana sy ny lakaoly fanaovana pirinty. Tonga miaraka amin'ny sampana roa ny orinasa, JINLONG HOT ME ...
Ny fanamorana ny fihanaky ny COVID-19 dia mila ny fiaraha-miasa rehetra
Ny fanamorana ny fihanaky ny COVID-19 dia mila ny fiaraha-miasa rehetra. Olana iraisam-pirenena izany izay mangataka ny tsirairay mba haneho ny andraikitr'izy ireo amin'izao tontolo izao. Noho izany dia manantena izahay rehetra, na tanora na antitra, salama na tsia, manankarena na mahantra, manandrana misoroka fivoriam-be, mijanona ao an-trano ...